दिपकलाई ५ प्रश्न, अवार्डको बिचबाटै किन उठेर हिंडेको ? « Ramailo छ
दिपकलाई ५ प्रश्न, अवार्डको बिचबाटै किन उठेर हिंडेको ?
दिपकले दिए स्पष्टिकरण
गत शनिबार आयोजित एनएफडिसी अवार्डको बिचबाट दिपकराज गिरी र दिपाश्री निरौला उठेर हिंडेपछि यस बारेमा विभिन्न खाले टिका टिप्पणी भैरहेका छन् । अवार्डको बिचबाटै उठेर हिंड्नुको कारण बारे दिपकराजले आफ्नो तर्फबाट स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
१.तपाईंहरु (दिपक र दीपा) अवार्डबाट उठेर किन हिंड्नु भएको ?
हो हामी बिचबाट उठेर हिंडेका हौं । तर अवार्ड बारे हामीले कहीं कतै पनि न विरोध गरेका छौं, न आक्रोश नै पोखेका छौं । सबै अवार्ड हामीले पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राखेका पनि छैनौं । बसुञ्जेलसम्म बस्यौं, त्यसपछि हामी उठेर हिंड्यौं । फेरी अवार्डबाट उठेर हिंड्ने हामी मात्रै थिएनौं । खगेन्द्र लामिछाने, विपिन कार्की जस्ता कलाकार त अवार्डमै जानु हुन्न अब त्यसलाई के भन्ने ?
२.तपाईंहरु उठेर हिंडेपछि आयोजकको तर्फबाट तपाईंहरुलाई सम्पर्क भएको थियो या थिएन ?
हामीलाई उहाँहरुले बोलाउनु भएको थियो । ‘तपाईंहरुको नाममा अवार्ड छ, आउनु’ भन्नु भएको थियो । तर हामी गएनौं । अवार्ड छ भन्ने वित्तिकै गएको भए त अवार्ड थाप्न मात्रै गएको जस्तो हुन्थ्यो नि होइन र ?
३.’ताली बजाउन आएको होइन’ भन्दै तपाईंहरु निस्किनु भयो रे ?
दिपाजीले यो कुरा औपचारिक रुपमा कहीं पनि भन्नु भएको छैन । फेरी हामी ताली मात्रै बजाउनु पर्ने भए पनि जान्थ्यौं । जसले जित्छ त्यो बेलामा त ताली बजाउनै पर्छ नि । हो हामीमा असन्तुष्टि थियो तरपनि भनेका थिएनौं र छैनौं पनि । हामी ताली मात्रै बजाउन आएका होइनौं भन्ने कुरा हामीले कहीं पनि औपचारिक रुपमा भनेकै छैनौं ।
४.भनेपछि अवार्ड नपाएपछि उठेर हिंडेको चाहिं हो ?
हामी हिंड्दा १० विधामा अवार्ड भैसकेको थियो । तपाईं आफैं भन्नुस् १८ विधा मध्ये हाम्रो फिल्मले कति वटा विधामा अवार्ड पाउँथ्यो होला ? हामीलाई वेस्ट फिल्म र निर्देशक सहित अरु दुई विधामा अवार्ड दिइयो । स्क्रिप्ट, क्यामेरा, सम्पादन र संगीत विना कसरी वेस्ट फिल्म हुन्छ ? हामीले यी चारै विधामा हारेका छौं । विधाका हिसाबले पुरानो डुंगाा वेस्ट फिल्म हो । फेरी यो कुरालाई पनि हामीले विरोध गरेका छैनौं ।
५.जुन अवार्डमा पनि किन तपाईंहरु विवादमा पर्नु हुन्छ ?
यो मान्छेको नेचर अनुसार भर पर्छ । कोही जति अन्याय भएपनि मौन बस्छन् । हामी अन्याय भए जस्तो लाग्यो भने बोल्छौं अनि विवाद हुन्छ । आन्दोलन पनि त्यस्तो देशमा हुन्छ जुन देशका नागरिक अन्याय पर्यो भने आवाज उठाउँछन् । अर्को कुरा अवार्ड समारोहमा अवार्ड पाउने बाहेक अरु सहभागी हुंन्नन् । देशका स्टार कलाकार र निर्माता तथा निर्देशक सहभागी हुन्नन् भने यस बारेमा चाहिं किन कुरा उठ्दैन् ?